EverSticky, fampiharana naoty mipetaka izay mirindra amin'ny Evernote | Ubunlog
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny EverSticky isika. Ity dia fitaovana Qt mipetaka tsotra ho an'ny birao Gnu / Linux izay noresahan'izy ireo indray andro Fanentanana Linux, ary hitako fa mahaliana. Ny fampiharana dia mirindra amin'ny Evernote y Izy io dia miasa amin'ny drafitra Evernote® rehetra (maimaim-poana, manokana, matihanina), raha mbola tsy mihoatra ny fetra fitahirizana na entana mihatra amin'ny drafitray. Haneho endrika lahatsoratra manankarena ao amin'ny naoty koa izany.
Ity fampiharana ity dia hanome antsika taratasy mipetaka azo apetraka eo amin'ny latabatry. Ireo naoty ireo dia ho voatahiry ho azy, ary ampiarahina amin'ny Evernote. Ny fampiharana dia ahafahanao mandray an-tsoratra haingana amin'ny fampiasana windows mitovy amin'ny posits mavo mahazatra.
Ny naoty mipetaka izay azontsika noforonina dia hampiseho votoaty lahatsoratra manankarena. Na dia voafetra ihany ny safidy fandrafetana naoty ao amin'ny EverSticky, raha mametaka lahatsoratra manankarena isika (toy ny boaty fanamarinana, latabatra, sns.) haseho tsara ny zava-drehetra.
1 Mametraka EverSticky amin'ny Ubuntu 20.04
1.1 Amin'ny fonosana DEB
1.2 Amin'ny maha fonosana Snap azy
2 Topi-maso vetivety amin'ilay programa
Mametraka EverSticky amin'ny Ubuntu 20.04
EverSticky dia azo jerena azo alaina ho fonosana .DEB ao amin'ny anao Repository GitHub, na dia tokony holazaina aza fa ilaina ny Ubuntu 20.04 / Linux Mint 20 sy ny dikan-teny manaraka. Ho an'ny fizarana Gnu / Linux hafa dia ilaina ny manangona azy avy amin'ny loharano (mitaky fanalahidin'ny API famokarana Evernote izany). Ankoatra ny fahafahana mampiasa ny fonosana .DEB, izahay koa dia hanana a snap pack hametraka azy. Amin'ireto andalana manaraka ireto dia ho hitantsika ny mety ho fametrahana azy roa.
Amin'ny fonosana DEB
Para alaivo ny fonosana .DEB, amin'ny terminal (Ctrl + Alt + T) dia tsy maintsy mampiasa wget toy izao manaraka izao isika:
Rehefa vita ny fampidinana dia afaka mandeha any amin'ny apetraho ny fonosana izay vao nalainay tamin'ny fanoratana ity baiko hafa ity:
Aorian'ny fametrahana dia manana ihany izahay tadiavo ny mpandefa an'ity programa ity hanombohana azy.
Para esory ity programa ity, izay napetraka ho fonosana .DEB, dia tsy maintsy manokatra terminal (Ctrl + Alt + T) fotsiny isika ary manatanteraka ny baiko ao anatiny:
Amin'ny maha fonosana Snap azy
Raha mila mametraka ity programa ity ho snap package, amin'ny terminal (Ctrl + Alt + T) dia mila manoratra fotsiny ianao:
Rehefa vita ny fametrahana dia afaka isika manomboka ny programa amin'ny launcher izay ho hitantsika ao amin'ny rafitra misy antsika.
Esory ny fonosana snap amin'ity programa ity, tsotra toy ny fametrahana azy io. Ilaina fotsiny ny manokatra terminal (Ctrl + Alt + T) ary manatanteraka ny baiko ao anatiny:
Ity programa ity dia hanome kisary ao amin'ny systray, izay ahafahan'ny mpampiasa mamorona naoty vaovao, na dia azo atao aza ny mamorona naoty vaovao amin'ny fampiasana ny bokotra + izay ho hitantsika ao amin'ny naoty mipetaka efa misy. Ny safidy misy dia ahafahantsika manery ny fampifanarahana amin'ny Evernote, mitondra ny naoty ho eo aloha, manakatona ny fivoriana Evernote ary miditra amin'ny fanamafisana kely ny fampiharana.
Ao amin'ny fandaharana fandaharana ho hitantsika safidy toy ny fametrahana ny elanelam-potoana fampifanarahana, ny fanamarinana ny fanavaozam-baovao amin'ny fampiharana, ary ny fametrahana ny endriky ny kisary ho mazava na maizina. Tokony holazaina izany EverSticky dia tsy tonga miaraka amin'ny safidy namboarina hanombohan'ny fiara rehefa miditra, fa afaka manampy azy amin'ny tanana. Raha tonga miaraka amin'ny fitaovana iray ny tontolon'ny biraonao ampio fampiharana fanombohana, azo ampiana avy eo amin'ny fampiasana eversticky toy ny baiko.
Ny taratasy mipetaka dia tena fototra. Izy ireo ihany no manohana ny sasany amin'ny fitendry hitsin-dàlana toy ny Ctrl + b, izay ahafahantsika misafidy ny lahatsoratra amin'ny marika matevina sy na Ctrl + i, hanaovana sora-mandry ny lahatsoratra.
Na izany aza, mba hahatonga ny naoty ho manintona kokoa, Afaka mametaka lahatsoratra manankarena isika ary EverSticky no hampiseho izany. Noho izany, raha mandika boaty iray isika ka mametaka azy amin'ny naoty, dia hihetsika araka ny efa nampoizina ilay boaty, mba hahafahantsika manamarina sy manaisotra izany. Izany koa dia ahafahantsika mametaka sary, mandika ny sary, fa tsy ny lalan'ny sary. Na raha mametaka lisitra isika, dia ahafahantsika manohy manampy zavatra ao aminy ilay fandaharana.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ity programa ity, ny mpampiasa dia afaka mandeha any amin'ny pejy web na ho tahiry ao amin'ny GitHub an'ny tetikasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » EverSticky, fampiharana naoty mipetaka izay mirindra amin'ny Evernote